အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 22W ၏လမ်းကြောင်း update | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 22W ၏လမ်းကြောင်း update
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည့် 22W သည် အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း(CAT-4) အဆင့်အထိ အားကောင်းလာနိုင်ကြောင်း JTWC မှ LONG-RAGNE FORECAST (120 Hrs) အား အောက်ပါအတိုင်းပုံဖေါ်တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာလျှင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၃၁ မိုင်မှ ၁၅၅ မိုင်အထိ ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
မူလအရွယ်အစားကိုကြည့်ရှုရန်ပုံပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။ SIZE – 1280×664 pixels , 198 KB
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 22W, tropical-storm, weather. 1 Comment »
One Response to “အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 22W ၏လမ်းကြောင်း update”
လာမည့် နာရီ ၁၂ဝ အတွက် long range forecast ပုံ
« အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့ Twentytwo
22W မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း LUPIT ဖြစ်လာပြီ »